လမ်းပြကြယ်: တရားတော်နာယူရန် ဖိတ်ကြားလွှာဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်းတို့….
တရားတော်နာယူရန် ဖိတ်ကြားလွှာဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်းတို့….
လောကချမ်းသာကျောင်း၊ Brooklyn, New York တွင် သီတင်းသုံးသော စိန်စီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သညောဘာသ (မဟာစည်ဆရာတော်) မှ တရားတော်များ ဟောကြားချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တရားတော်နာကြွရောက်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
( ၁ ) နေ့ရက် သောာကြာနေ့
အချိန် ညနေ ၇း၀၀ နာရီ မှ ၉း၀၀ နာရီ
နေရာ Clementi Temple
23A Jalan Mas Puteh, Singapore 128628
( ၂ ) နေ့ရက် စနေနေ့
အချိန် ညနေ ၆း၃၀ နာရီ မှ ၇းး၃၀ နာရီ
နေရာ Burmese Buddhist Temple (Topayoh)
( ၃ ) နေ့ရက် တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် ညနေ ၇း၀၀ နာရီ မှ ၈း၀၀ နာရီ
နေရာ Blk 113 #06-178
Bukit Batok West Ave 6, Singapore 327873
(8min walk from Bukit Batok MRT)
ph: 90217581, 64058684